असहाय तीन बालबालिकालार्इ युवराज थापाकाे सहयाेग « Naya Page
असहाय तीन बालबालिकालार्इ युवराज थापाकाे सहयाेग
अर्घाखाँची : बाबाको मृत्युपछि आमा पनि छोडेर गएका असहाय तीन बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग मिलेको छ । हाल इजरायलमा रहेका अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका-१ युवराज थापा र बुटवल तिलोकन नगरपालिका-५ का दाजी राम ढकालले लत्ता कपडा सहित शैक्षिक सहयोग गरेका हुन् ।
उनीहरूले मृतक भविस्वर पाेखरेलकाे छोरी मनिषा पोखरेल, छोरा महेश पोखरेल र मनिराम पोखरेललार्इ जाडोमा लगाउने लत्ताकपडा र सम्पूर्ण स्कुलका ड्रेसहरू हस्तान्तरण गरे । उनीहरूले छोरी मनिषालार्इ १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क पढाउने भएका छन् ।
उनीहरूले तीनै जनालार्इ जाडोमा लगाउने एक ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, स्विटर, जुत्ता , मोजा, र स्कुल जाँदा लगाउने ड्रेस, निलो कमिज र कालो पाइन्ट हस्तान्तरण गरे । हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा स्कुलका विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय बासी र गाउँपालिका जनप्रतिनिधीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
छोरी मनिषा पोखरेल र जेठो छोरा महेश पोख्रेल अहिले आधारभूत बिधालय मालारानी वार्ड नं. १ सुन्दरा पोखरा अर्घाखाँचीमा अधयनरत छन् भने कान्छो छोरा मनिराम जनजागृती बालशीक्षा स्कुलमा पढदै छन् ।
असहाय बालबालिका अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वार्ड नं. १ मोरङ निवासी ७२ वर्षीय यम नारायण पोखरेलका नातिनातिना हुन् । उनका छोरा भविस्वर पोखरेल करिब ४ वर्ष अगाडि भारतको दिल्लीमा आत्महत्या गरेको थिए भने बुहारी दुर्गा पोखरेल छोरा छोरी छोडेर पोइला गएकी थिइन् ।